Movies - Myanmar Asian TV
Meet Me In St. Gallen ( 2018 )
2018 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ ဖိလစ်ပိုင် Drama Romance ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ … စိတ်ညစ်နေတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ အလုပ်မှာ အဆင်မပြေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် ညတစ်ညမှာ ဆုံကြတယ် … သူတို့ရဲ့အဆင်ပြေမှု့တွေကို အပြန်အလှန် ဝေမျှရင်း ခင်သွားကြတယ် … အဲ့အချိန်မှာ ကောင်မလေးက တွေးလိုက်တယ် … ဒီလူဟာ ငါ စံပြထားတဲ့ ယောင်္ကျားလေးပဲ…
2018 မှာ ထွက်ရှိထားတဲ့ Never Not Love You ဆိုတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်ဇာတ်ကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ … Cast အနေနဲ့ကတော့ ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးတွေရဲ့ အသည်းစွဲ James Reid နှင့် မင်းသမီးချောလေး Nadine Lustre တို့က ပါဝင်ထားပါတယ် …. ဒီဇာတ်ကားလေးပုံစံကတော့ လူငယ်တွေကြားမှာဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းမျိုးလေးပါပဲ … အခုခေတ်လူငယ်တွေ…
Life itselfဆိုတဲ့ ဒီmovie​လေးက​တော့ ​ခေါင်းစဉ်​အတိုင်းပါဘဲ ချစ်​ခြင်း​မေတ္တာကိုအ​ခြေခံထားတဲ့ လူ့ဘဝအ​ကြောင်း​လေးကို ရိုက်​ကူးထားတာပါ ဒီဇာတ်​ကား​လေးရဲ့ themeတစ်​ခုက​တော့ “ဘဝမှာ ဘယ်​လိုဘဲကျရှုံးပါ​စေ ဘယ်​လိုဘဲလဲကျပါ​စေ အားတင်းပီးဆက်​​လျှောက်​လှမ်းခဲ့ရင်​ ကိုယ်​အလိုရှိတဲ့အရာဆီကို ​ရောက်​ကို​ရောက်​မှာပါ”တဲ့ ❤ ဇာတ်လမ်းရဲ့အ​ကြောင်းအရာက​တော့ Willနဲ့ Abbyက အရမ်းချစ်​ကြတဲ့ ချစ်​သူ​တွေပါ ​နောက်​​တော့ Abbyကိုယ်​ဝန်​ရှိသွားတယ်​ ​Abbyက car accidentတစ်​ခု​ကြောင့်​ ကိုယ်​ဝန်​ကြီးနဲ့ဆုံးသွားတဲ့​နောက်​မှာ Willဟာ စိတ်​အ​တော်​ထိခိုက်​သလိုဖြစ်​သွားပါတယ်​ …….
Feng Shui ( 2018 )
2018 ခုနှစ်မှာပဲ ထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ Feng Shui ဆိုတဲ့ ဂျိုဆွန်းခေတ် နောက်ခံ ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ … ဖုန်းရွှေ ( Feng Shui ) ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ တရုတ်ပြည်မှ ဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့ စကားလုံးတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ် … မြန်မာလိုပြောရမယ်ဆိုရင် နေရာဒေသ နဲ့ မြေနေရာကိုတွက်ချက်ပြီး ကြီးပွားအောင်မြင်ဖို့ တွက်ဆပေတဲ့…
Principal: Am IaHeroine Who Is In Love? ( 2018 )
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ 2010 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Principal ဆိုတဲ့ Manga Series လေးကို Live Action အဖြစ် ပြန်ပြီး အသက်သွင်းထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ … မိဘနှစ်ပါးဖြစ်သူ ကွာရှင်းပြတ်ဆဲပြီးတဲ့ နောက်မှာ Shima Sumitomo ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးဟာ သူမရဲ့ မိခင်နှင့်အတူ နေထိုင်ခဲ့ပါတယ် … ဒါပေမဲ့ ပထွေးဖြစ်သူနဲ့နေရအဆင်မပြေတာရယ် ,…